နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မော်ဂျူး၏ အမြင့်ဆုံးထွက်အားကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd.
ဆိုလာဆဲလ် module များအကြောင်းမိတ်ဆက်
ဆိုလာဆဲလ် မော်ဂျူးများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်သော ဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များ၊ အလွန်အဖြူထည်ဆန်သော ဖန်သားပြင်၊ EVA၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော TPT နောက်ခံနှင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဖရိမ်တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ ပြင်းထန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိသိပ်မှု နှင့် ပြင်ပအား၏ လက္ခဏာများ ရှိသည်။
ဆိုလာဆဲလ် မော်ဂျူး အမျိုးအစားများ
(၁) Monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားသည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်၏ 17% ခန့်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးသို့ 24% ဖြစ်သည့် ဆိုလာဆဲလ်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံး၍မရပါ။ monocrystalline silicon သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ခိုင်ခံ့သောမှန်နှင့် ရေစိုခံစေးဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 25 နှစ်အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးသည်။
တစ်ခုတည်းသောပုံဆောင်ခဲပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆိုလာ module: ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆိုလာ module ကိုလည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် module အဖြစ်လူသိများသည်, ဒါခေါ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, panel ကိုမှကွေးနိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ 30 ဒီဂရီအထိ ကွေးညွတ်ထားသော မြင်ကွင်း။ ဆိုလာဆဲလ် မော်ဂျူး (ဆိုလာပြားဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်သည့် စနစ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည် စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှု စနစ်၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။
(၂) ပိုလီဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များသည် ပိုလီဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် ဆင်တူသော်လည်း ပိုလီဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များ၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားမှာ များစွာလျော့နည်းသွားပြီး ၎င်း၏ photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားမှာ 15% ခန့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အရ၊ ၎င်းသည် monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များထက်စျေးသက်သာသည်၊ ပစ္စည်းသည်ရိုးရှင်းသည်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုကိုသက်သာစေသည်၊ စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာကိုရရှိစေသည်။ ထို့အပြင်၊ polysilicon ဆိုလာဆဲလ်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် monocrystalline ဆိုလာဆဲလ်များထက် တိုတောင်းပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်-စျေးနှုန်းအချိုးအရ၊ monocrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များသည် အနည်းငယ်ပိုကောင်းပါသည်။
Amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်သည် ပါးလွှာသောဖလင်ဆိုလာဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပြီး 1976 ခုနှစ်တွင် ပြသခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းတွင် monocrystalline silicon နှင့် polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် လုံးဝကွဲပြားပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်၊ amorphous silicon ဆိုလာဆဲလ်များ၏ အဓိကပြဿနာမှာ photoelectric အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားနည်းပါးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အဆင့်သည် 10% ခန့်ရှိပြီး မတည်ငြိမ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းပါဝါသည် ကျဆင်းသွားပါသည်။
ဆိုလာဆဲလ် module ပါရှိပါတယ်။
မြင့်မားသော photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းပါဝါနှင့်အတူ, မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ; ချစ်ပ်တစ်ခွင်လုံး ပါဝါပြောင်းလဲခြင်း၏ တူညီမှုကို သေချာစေရန် အဆင့်မြင့် ပျံ့နှံ့မှုစွမ်းရည်၊ ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှု၊ ခိုင်ခံ့သော adhesion နှင့် electrode weldability အားကောင်းစေရန်၊ မြင့်မားသောတိကျသောမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းဂရပ်ဖစ်နှင့်မြင့်မားသောအပြားပြားသည်ဘက်ထရီအားတက်ကြွစွာဂဟေဆော်ရန်နှင့်လေဆာဖြတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
Solar module နိဒါန်း နိဒါန်း
ဆိုလာ ဖိုဗိုတယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲပေးသည့်ကိရိယာမှာ photovoltaic cell ဟုခေါ်သော SolarCell ဖြစ်သည်။ PhotovoltaicEffect သည် ဆိုလာဆဲလ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ နေရောင်ခြည်သည် ဆိုလာကလာပ်ကို ထိသောအခါ၊ ဆဲလ်သည် အလင်းစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူကာ photoelectron-hole အတွဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘက်ထရီအတွင်းတည်ဆောက်ထားသော လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်တွင်၊ ဓါတ်ပုံထုတ်လုပ်ထားသော အီလက်ထရွန်များနှင့် အပေါက်များကို ခွဲခြားထားကာ ဘက်ထရီ၏အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် မတူညီသောအားသွင်းမှုများစုပုံလာခြင်း၊ ယင်းမှာ "photogenerated voltaic effect" ဖြစ်သည့် "photogenerated voltage" ဖြစ်သည်။ . လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်စက်ကွင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ဆွဲထားပြီး ဝန်တစ်ခုချိတ်ဆက်ပါက၊ ဝန်မှတဆင့် "ပုံသွင်းထားသော လျှပ်စီးကြောင်း" စီးဆင်းသွားပြီး ပါဝါအထွက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နေ၏အလင်းစွမ်းအင်ကို အသုံးချနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
တူညီသော အပူချိန်တွင်၊ ဆိုလာပြားပေါ်ရှိ အလင်းပြင်းအား လွှမ်းမိုးမှု- အလင်းပြင်းအား ပိုများလေ၊ ဆိုလာပြား၏ အဖွင့်ပတ်လမ်း ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း များလေလေ၊ နှင့် အမြင့်ဆုံး အထွက်စွမ်းအား ကြီးလေဖြစ်သည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အား ပြောင်းလဲမှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ရောင်ခြည်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ ဝါယာရှော့လျှောစီးကြောင်း ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့ သိသိသာသာမဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။
တူညီသောအလင်းရောင်ပြင်းထန်မှုအောက်တွင်ဆိုလာပြားပေါ်ရှိအပူချိန်၏လွှမ်းမိုးမှု- ဆိုလာဆဲလ်အပူချိန်တိုးလာသောအခါ၎င်း၏အထွက်အဖွင့်ပတ်လမ်းဗို့အားအပူချိန်နှင့်အတူသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်၊ short circuit current အနည်းငယ်တိုးလာသည်၊ ယေဘုယျလမ်းကြောင်းသည်အမြင့်ဆုံး output power လျော့နည်းသွားသည်။ ဆိုလာပြား
ဆိုလာ module ၏ အမြင့်ဆုံး output power ကို မည်သို့ သိနိုင်မည်နည်း။
ဆိုလာပြားထုတ်လုပ်သူများ၏ ဆိုလာမော်ဂျူးများ၏ အမြင့်ဆုံးထွက်အားကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
photovoltaic modules များ၏ nominal power ကို စံအခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်သည်။ အမှန်တကယ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းသည် nominal power ကို ကျော်လွန်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ ၎င်းသည် အင်ဗာတာရွေးချယ်မှုနှင့် စနစ်၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို ထိခိုက်စေမည့် photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ဒီဇိုင်းတွင် ဂရုမစိုက်သော ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်း- နေရောင်ခြည်မှ ဖြာထွက်သော စွမ်းအင်သည် နေရောင်ခြည်ဖြင့် ယူနစ်ဧရိယာသို့ ဖြာထွက်သည်။ ယူနစ်များသည် တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် ဝပ်ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းအမည်ခံပါဝါကို စံအခြေအနေများ၊ STC (standardtestcondiTIion) ၏ စံစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများမှာ- 1. Irradiance: 1000W/m2၊ 2. အပူချိန်- (25±1) â„ƒ, 3. Spectral ဝိသေသလက္ခဏာများ- AM1.5 စံသတ်မှတ်ချက် .
ထို့ကြောင့် အင်ဗာတာ နှင့် အခြားသော စက်ပစ္စည်းဒြပ်စင်များကို မစဉ်းစားဘဲ အစိတ်အပိုင်း၏ အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိနိုင်သော စွမ်းအားမှာ နေရောင်ခြည်နှင့် အပူချိန်ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ နေရောင်ခြည် အဆက်မပြတ်၊ 1368W/m2 ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ရာသီဥတုနှင့် အခြားရှုထောင့်များမှ သက်ရောက်မှုရှိပြီး အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးမှာ 1200W/m2 ခန့်ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်း၏ပါဝါအပူချိန်စနစ်သည် -0.39%/â"ƒ ခန့်ဖြစ်သည်။
နိဂုံး- 250W အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံး output power သည် Pmax=1.2* (1- (25+30) (-0.0039) *250=1.2*1.1755*250=352.65W ဖြစ်ပြီး အနှုတ် 30°C တွင် စက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ မြောက်ပိုင်း Ningxia၊ မြောက်ပိုင်း Gansu နှင့် တောင်ပိုင်း Xinjiang ကဲ့သို့သော တရုတ်နိုင်ငံ၏ နေအရှိဆုံးဒေသများတွင်၊ 250W module တစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိနိုင်သော ပါဝါသည် 300W သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
နေရောင်ခြည်၏ ရောင်စဉ်တန်းအသိပညာ- နေရောင်ခြည်သည် အလင်းလှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးအပါအဝင် အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ မဲနယ်၊ ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် စသည်တို့အပါအဝင် လှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုး၏ အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော အလင်း၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်၊ အစိမ်း၊ မဲနယ်၊ အပြာ၊ ခရမ်းရောင်တို့သည် လူတို့၏မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ လှိုင်းအလျား၏ရှည်လျားသောအစိတ်အပိုင်းသည် အနီရောင်အလင်းဖြစ်ပြီး အနီရောင်အလင်းထက် လှိုင်းအလျားရှည်သည် အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ လှိုင်းအလျား၏တိုတောင်းသောအပိုင်းမှာ ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး၊ ခရမ်းရောင်အလင်းထက် လှိုင်းအလျားရှည်သည် ဆိုလာရောင်စဉ်၏လှိုင်းအလျားမှာ အလွန်များပြားသော်လည်း၊ angstroms အနည်းငယ်မှ ဒါဇင်များစွာအထိ ကျယ်သော်လည်း လှိုင်းအလျား ပျံ့နှံ့မှုအရ ဓာတ်ရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ အရွယ်အစားသည် မညီညာပေ။ မြင်နိုင်သောအပိုင်းရှိ ဓါတ်ရောင်ခြည်စွမ်းအင်တွင် အကြီးဆုံးဇုန်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ရောင်စဉ်ဧရိယာ 48%, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ရောင်စဉ်ဧရိယာ 8%, အနီအောက်ရောင်ခြည် စွမ်းအင် ရောင်စဉ် ဧရိယာ 44%, ဆိုလာဆဲလ်သည် မြင်နိုင်သော စွမ်းအင် အစိတ်အပိုင်းကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်စဉ်တန်းဧရိယာကို စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်ပါ၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်းဒေသကို အပူအဖြစ်သို့သာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်း- အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း နေမှ ဖြာထွက်သော စွမ်းအင်ပမာဏကို ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟုခေါ်သည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ- ဓာတ်အားပေးစနစ်များမှ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်
1၊ နေ၏ အမြင့်ပေ ထောင့် သို့မဟုတ် လတ္တီတွဒ်- နေ၏ အမြင့်ပေထောင့် ပိုကြီးလေလေ၊ လေထု ဖြတ်သန်းရာ လမ်းတိုလေလေ၊ နေရောင်ခြည်၏ လေထုအပေါ် သက်ရောက်မှု နည်းပါးလေလေ၊ နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်သည် မြေပြင်သို့ အားကောင်းလေလေ၊ နေရောင်ခြည်၏ အမြင့်ပေထောင့် ကြီးလေလေ၊ တူညီသော နေရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှု ပမာဏ၏ ဧရိယာ ကျဉ်းလေလေ၊ နေရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှု အားကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေ့လယ်ခင်းတွင် နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်သည် မကြာမီ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
2. အမြင့်ပေ- အမြင့်ပေ ပိုမြင့်လေလေလေ ပိုပါးလေလေ၊ နေရောင်ခြည်၏ လေထုအပေါ် သက်ရောက်မှု လျော့နည်းလေလေ၊ မြေပြင်သို့ ဆိုလာရောင်ခြည် အားကောင်းလေလေ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တိဗက်ကုန်းပြင်မြင့်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အပြင်းထန်ဆုံးသော နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုရှိသည်။
3. ရာသီဥတုအခြေအနေ- နေနေရောင်ခြည်အပေါ် အနည်းငယ်သက်ရောက်မှုရှိပြီး မြေပြင်သို့ အားကောင်းသော နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိသော နေသာသောနေ့ရက်များတွင် တိမ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Sichuan Basin တွင် တိမ်ထူထပ်ပြီး မိုးရွာသော ရာသီဥတုတွင် နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်သည် အားပျော့သွားကာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် တန်ဖိုးအနိမ့်ဆုံး ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
4. Atmospheric Transparency- မြင့်မားသောလေထု၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် နေရောင်ခြည်တွင် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာ ရှိသောကြောင့် မြေပြင်ပေါ်သို့ ရောက်လာသော နေရောင်ခြည်သည် အားကောင်းစေရန်။
6၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု အဆင့်- လေထုညစ်ညမ်းမှု ပြင်းထန်သည်၊ နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်သည် အားနည်း၍ အားကောင်းသည်၊ နေရောင်ခြည် ကျရောက်မှု နည်းပါးသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေအပူဆုံးဒေသသည် ဆာဟာရသဲကန္တာရ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ နေရောင်ခြည် နာရီပေါင်း 4300 သို့မဟုတ် တစ်နေ့လျှင် 11 နာရီ 45 မိနစ်ခန့် တောက်ပသော နေရောင်ရှိသည်။